တရုတ်နိုင်လွန်ကြိုးချည် extrusion စက်လိုင်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
နိုင်လွန်ကြိုးချည် extrusion စက်လိုင်းသည် စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤယူနစ်သည် မတူညီသော အချင်းများ၊ ကွဲပြားခြားနားသော အရောင်အသွေးရှိသော ကြိုးချည်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ကြမ်းကျွေးခြင်းမှ နောက်ဆုံးအကွေ့အကောက်များအထိ၊ ၎င်းကို အလိုအလျောက်လည်ပတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ extrusion machine line မှထုတ်လုပ်သော နိုင်လွန်ကြိုးချည်သည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ အရောင်တောက်ပခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းစသည့် အားသာချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤချည်မျိုးမှလုပ်သော နိုင်လွန်ကြိုးသည် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုထားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့် ပြည့်စုံသောနိဂုံးချုပ်မှုနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အောက်ပါအတိုင်း အသင့်တော်ဆုံး စက်လိုင်းမော်ဒယ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
စွမ်းရည် (kgs/h) 120-140 ကီလိုဂရမ်
Filament Dia 0.14-0.5mm
3. ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရင့်ကျက်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
4. တစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့
စိုက်ပျိုးရေးကြိုး၊ စက်မှုကြိုး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြိုး၊ ငါးဖမ်းကြိုး၊ အိမ်သုံးကြိုး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ယခင်- 100% ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း အပေါက်များ/အပိုင်းအစများမှ တံမြက်စည်း/စုတ်တံအတွက် အရည်အသွေးမြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Mono Filament ပုံဆွဲစက်
နောက်တစ်ခု: ODM ပေးသွင်းသူ China Pet/PBT Filament Extruder/Plastic Fiber Making Machine for Fake Eyelash
ပလတ်စတစ်ကြိုး ဖိုင်ဘာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Plastic Rope Filament Extruder စက်
ပလပ်စတစ်ကြိုးချည် Extruder စက်